Sub Baker-Olimpico silikoon Kibistii Form - Sub Shiinaha Baker-Olimpico silikoon Kibistii Form-qeybiye,-SHQD Factory
Home » Products » Rooti Form
Sub Baker-Olimpico silikoon Kibistii Form
size caaryada: 18 1/10″x 13 1/5″ x 1 1/5'’ (46 x 33.5xx 3.2cm)
size Raar: 12 1/5’’ x 3 1/10'’ x 1 '’ (31 x 8cm)
qoto 1 1/5''(3cm)
No. of Indents = 5 x 1
miisaanka: 4.4 oz / 125g (/- 5g)
Waa maxay sababta Dooro The Form Baker Olimpico silikoon Kibistii
Baker-Olimpico waxaa ka go'an inuu siiyo xirfadlayaasha tayo leh qaabab cusub iyo qaab qalabka soda oo u oggolaan doonaa dadka, Sagna ay ku fikirayaan iyo hal-abuurka. Oo Baker-Olimpico had iyo innovating fikradaha cusub hal abuur leh oo kor u horumarinta warshadaha dubista iyo bixiyaan xal for caqabadaha farsamo.
Ka sokow, Baker-Olimpico diidaan inay tanaasul marka ay timaado tayo leh oo kaliya bixiyaan tayada sareeya dhamaan macaamiisheena. Si ay u joogteeyaan ugu tayada sareeya, our warshad si buuxda oo kaliya ma iswada laakiin inta badan shaqada waxaa la sameeyaa in gacmaha la xirfadlayaasha xirfad sare leh, Jidka waxaana naga go'an inaan la kulmo heerka ugu sareeya ee tayada iyo haybaddii.
Baker-Olimpico ayaa muhiim u ah wax xumu foomka kibista, waxaan dooran heerka ugu sareeya ee Maro adag iyo Besian silicone dareere ah in ay wax xumu. Intaa waxaa dheer, Baker-Olimpico qabsadey muhiimadda badan inay gacanta ku tayada, sidaas our derin waa 100% BPA free, iyo gudubtay imtixaankii ee FDA, LFGB iyo DGCCRF.
Maro adag Baker-Olimpico u muuqataa mid aad u cad iyo nusqaamaha ka jira xad siman kasta oo kale. Dhanka, silicone dareere Besian qabanayo si aad u wanaagsan, barti xoog, milicsiga iftiin wacan, siman geesaha, ma laalaabka leh iyo qashin.
foomka kibis Baker-Olimpico leh iska caabin heerkulka aad u fiican(-40℉ in 480℉), iyo dhow 3000 jeer soo noqnoqda isticmaalka ay sabab u tahay wax soo saarka processing ka xoogbadan, iyo alaabta ceeriin oo tayo sare leh.
Baker-Olimpico isku daro faa'iido ah ee Besian wax silicone dareere ah iyo processing gaar ah, oo abuuraa sifooyinka fiican ee Non-ul, ma jirto baahi loo qabo dufanka, saliidaha, iskubuufintooda ama subagga iyo waa arrin si fudud loo nadiifin, taas oo ka dhigaysa qof walba in uu noqdo sida pro a.
Baker-Olimpico PTFE BBQ mesh Mat
Baker-Olimpico Full Daabacaadda silikoon cajiin / Fondant Mat
Qol 312, dhismaha 20 Koonfur, No. 1188 Shenhong Rd., Henderson CIFI Center, Degmada Minhang, Shanghai, Shiinaha
Copyright © Shanghai Qian Dan International Trade Co., xaq Ltd.All hayaa